Izinqolobane ZaseTraintravel | ikhasi 4 ka 16 | Londoloza Isitimela
3 Kuhle Day Uhambo Kusukela Budapest ngu zemininingwane
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi Ngakho uke ekugcineni ukwenzile. Obeke e vacation yakho emsebenzini, wathenga amathikithi akho indiza salibangisa phezu eHungary kuze kube iholidi ngaphambi esasiwafanele. Futhi ngenkathi yilokho kuhle – ngemva kwakho konke, Budapest yidolobha elihle – ungazithengisi…
Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Czech Republic, Isitimela Sokuvakasha eHungary, Izikhangibavakashi Europe
Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi Amahholo Famous eYurophu kuxhumene kudala isiko European. amatiyetha Famous eYurophu ngiyakutjela ukusebenza okungavamile. It ngeke ngikushiye enyakaza, ihanjisiwe, futhi spellbound! Ubunjalo yaseshashalazini okusheshe lokusungula buyakhahlela ekhangayo. Lokhu kukhanya kobuhlakani kuqhubeka…
Isikhathi sokufunda: 6 amaminithi France iyikhaya izinkulungwane ezikhangayo. Kusukela yisakhiwo sodumo-Eiffel Tower eParis kuya amabhishi pebbled Nice, ezweni izinto engapheli ukwenza. Kodwa kuthiwani uma olivakashelayo kwi LAYOVER_DURATION, noma usuvele uhlolile ehhotela lakho…
Indlela Izikhangibavakashi Eco Friendly Ngo 2020?
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi Eco travel ngobungane iyahola izingqondo zethu njengoba singena kule eyishumi entsha. Nge izishoshovu zezemvelo ezifana Robert Swan futhi Greta Thunberg, umyalezo izwe athunyelwa nge crystal ukuzwakala. Thina liphelelwa isikhathi…
Business Travel ngu zemininingwane, Izeluleko Zokuhamba ze-Eco, Ukuhamba Ngezitimela, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi Kunzima ukukhetha kuphela 5 Easy Day Trips Kusukela Milan ngu zemininingwane ukwabelana nawe. Inhlokodolobha yemfashini yase-Italy iyakhazimula ngezinketho zezivakashi ezivakashelayo. Akugcini nje egcwele imfashini, kodwa ine umlando Amazing, izakhiwo, futhi amahle…
Isikhathi sokufunda: 7 amaminithi Kukhona izinto eziningi ngoba Paris waziwa. Kodwa izinto Mahhala ukwenza Paris akuyona into ke eyaziwa. Idume ngokuthi enye yezindawo eziningi romantic emhlabeni. A fashion dolobha nokulotshwa ipharadesi ngisho!…